Google, Twitter na Facebook gosiri nkwado ha na ọgụ Apple megide FBI | Esi m mac
Google, Twitter na Facebook gosiri nkwado ha na ọgụ Apple na-ebuso FBI
Facebook, Twitter y Google apụtawo na nkwado nke mkpebi Apple ike a backdoor na gị iOS sistemụ iji nyere FBI aka na ikpe iyi ọha egwu San Bernardino. Ndị isi nke nnukwu ụlọ ọrụ ndị a ekwuputala ụfọdụ okwu ọhaneze na Twitter na-egosi nkwado ha maka Apple, ma kelee ha maka ọgụ ha na-agba iji chekwaa nzuzo nke ndị ahịa.
Onye mbụ na-akwado mkpebi Apple na Tim Cook, bụ Onye isi Google Google Sundar Pichai, onye kpughere ụfọdụ okwu dị mkpa na Twitter, dị ka 'ịmanye ụlọ ọrụ ka ha kwe ka paireti nwere ike imebi ihe nzuzo onye ọrụ'. Na njedebe Pichai kwuru na ya na-atụ anya mkparịta ụka na-emeghe banyere nnukwu okwu a.
3/5 Anyị na-ewulite ngwaahịa echedoro iji chekwaa ozi gị yana anyị na-enye ndị mmanye iwu ohere ịnweta data dabere na iwu iwu ziri ezi
- Onyinye_uche (@onyinye_onyinye) February 17, 2016
4/5 Mana nke ahụ dị iche karịa ụlọ ọrụ chọrọ ka ha nwee ike hacking nke ngwaọrụ ndị ahịa na data. Nwere ike bụrụ usoro nsogbu
5/5 Na-atụ anya mkparịta ụka na-emeghe ma na-emeghe banyere okwu a dị mkpa
Mgbe Pichai gasịrị, Onye isi Twitter Twitter Jack Dorsey O gosikwara nkwado ya maka Apple ma kelee ya maka ndu ya.
Anyị kwụ @tim_cook na Apple (ma kelee ya maka ndu ya)! https://t.co/XrnGC9seZ4
- Jack (@jackson) February 18, 2016
N'ikpeazụ, Facebook O zipụkwara okwu n'okwu a na-ekwu na ha ga-eme ya 'lụọ ọgụ ike megide ihe ndị ahụ achọrọ, dịka ụlọ ọrụ na-eme ka ike gwụ ha site na nchekwa nke usoro ha', n’agbanyeghi na ekwuputaghi nkwado Apple n’uzo doro anya, obu ezie na ekwuputara ya n’onu ya.
Anyị na-ama iyi ọha egwu ikpe ma nwee ịdị n'otu zuru oke na ndị ụjọ metụtara. Ndị na-achọ ito, ịkwalite, ma ọ bụ ime atụmatụ omume ndị na-eyi ọha egwu enweghị ọnọdụ na ọrụ anyị. Anyị na-enwe ekele maka ọrụ siri ike ma dị mkpa nke iwu iji chebe ndị mmadụ. Mgbe ndị ikike ndị a natara anyị arịrịọ, anyị na-eme ihe. Agbanyeghị, anyị ga-aga n'ihu na ọgụ ike megide ya, ebe ụlọ ọrụ na-ada mbà site na nchekwa nke sistemụ ha. Ikpe ndị a ga-emepụta ụkpụrụ ọjọọ ma gbochie mgbalị nke ụlọ ọrụ iji hụ na ngwaahịa ha.
N'ụzọ dị ịtụnanya Yahoo na Microsoft jụrụ ikwu okwu n'okwu a n'agbanyeghị agbanyeghị na ahụ 'Reform Government Oversight (RGS)', nke Microsoft ụdị akụkụ wepụtara nkwupụta na isiokwu ahụ.
Companieslọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa gọọmentị kwenyere na ọ dị oke mkpa igbochi ndị na-eyi ọha egwu, ndị omekome ma nwee ike inyere ndị uwe ojii aka, ka ha nwekwuo ike site na ịhazi iwu ụlọ ikpe iji nweta ozi iji chebe onye ọ bụla. Agbanyeghị, ekwesighi ịmanye ụlọ ọrụ teknụzụ iwu ụzọ mbata nke teknụzụ ha nke na-echekwa ozi ndị ọrụ ha. GSlọ ọrụ RGS nọgidere na-etinye aka n'inye ndị mmanye iwu na enyemaka ị chọrọ mgbe ị na-echebe nchebe nke ndị ahịa gị na ozi ndị ahịa gị.
Companieslọ ọrụ ndị ọzọ so na otu RGS gụnyere AOL, Yahoo, Evernote, Dropbox y LinkedIn, ekwupụtabeghị na nke a.
Dị ka Apple agha megide FBI, ụlọikpe nyere Apple oge ka ọ zaghachi iwu ya ị kpọghee iPhone 5C na San Bernardino eyi ọha egwu. Courtlọ ikpe ahụ ebidola Apple ụbọchị ise ka ọ zaa, mana ugbu a, emeela ka ụbọchị nke ọzọ gaa na February 5, ebe ọ bụ na leta na-emeghe site na Tim Cook mere ka o doo anya na ụlọ ọrụ ahụ agaghị anabata ikpe ụlọ ikpe, ma na-eme ihe ọ bụla iji chebe nzuzo nke ndị ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Google, Twitter na Facebook gosiri nkwado ha na ọgụ Apple na-ebuso FBI
Mana m ghọtara na Facebook na-ere ozi ahụ, ọfụma amaghị m ihe m ga-eche, ọ dị mma na Apple na-echekwa ozi ndị ahịa dịka nke a, mana amaghị m, ọ bụkwa onye na-eyi ọha egwu, ya bụ, n'okpuru ọnọdụ ndị a ma ọ bụrụ Ana m akwado ya ka ọ ghara igbochi ya ma nyefee ya
Etu esi amata ọnụọgụ ụgwọ nke batrị MacBook gị
Esi tinye ihe na Kalịnda site na Ozi